किन दिए त भारतीय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक कुम्ब्लेले राजिनामा ? « Sansar News
किन दिए त भारतीय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक कुम्ब्लेले राजिनामा ?
७ असार २०७४, बुधबार ०९:०९
७ असार, काठमाडौँ । कप्तान विराट कोहलीसँग खटपट परेपछि भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक अनिल कुम्ब्लेले राजिनामा दिएका छन् । कप्तान कोहलीले उनको प्रशिक्षण शैलीमा प्रश्न चिन्ह उठाउदै आएका कारण राजिनामा दिएको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् ।
च्याम्पियन्स ट्रफीको फाईनलमा पाकिस्तानसँग नमिठो पराजय भोगेपछि आलोचनाको शिकार भोगेका कुम्ब्लेले प्रशिक्षकबाट राजिनामा दिएका हुन् । कुम्ब्लेले भारतीय क्रिकेट बोर्डसँग बिवाद सुल्झाउन खोजेतापनि अन्ततः राजिनामा दिने विचार गरेको कुम्ब्लेले बताएका छन् ।
कुम्ब्लेले भारतीय प्रशिक्षकको रुपमा १७ वटा टेष्ट प्रतियोगितामा १२ वटामा जित एउटामा हार ४ वटामा बराबरीमा टुंिगएको थियो । यस्तै उनकै प्रशिक्षणमा भारतले न्युजिल्यान्ड र इङल्यान्ड सँगको एकदिवसीय खेल समेत जितेका थिए ।